Warar isasoo taraya ayaa sheegaya in masuuliyiin ka socda maamulka Soomaaliland ay booqasho ku tageen magaalada Tal'abiib ee caasimada u ah Yahuudda kana mid ah dhulka xoogga lagu heysto ee Filastiin,
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo usbuuciiba maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu lafa guraa mawaadiic muhim ah.
Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda qarax Ka Dhacay isgoyska Dabka.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo maanta duhurkii ka dhacay goob ammaankeeda si aad ah loo ilaaliyo oo kutaal wadada Makka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho.
Xoogaga Al Shabaab ayaa markale weerar safballaaran ah ku qaaday saldhigyada ciidamada AMISOM iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin mid kamida degmooyinka gobolka Sh/Hoose.
Wararka ka imaanaya dhulka Soomaligalbeed ee gummeysiga Itoobiya ku jira ayaa sheegaya in Nin xildhibaan ah uu toogasho ku dilay dad shacab ah.
0 Wednesday March 27, 2019 - 06:54:47
Wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegyaa in ciidamada Kenya ay xalay burburiyeen xaruntii Shirkadda Hormuud Telecom ee Tuulada Jaldeys oo ka tirsan Degmada Afmadow ee Gobolka Jubbada Hoose.
0 Tuesday March 26, 2019 - 07:27:45
0 Sunday March 24, 2019 - 07:58:30
Xiisado dhanka ammaanka ah ayaa lagasoo sheegayaa magaalada Baraawe oo katirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Dowladda Federaalka ayaa xillalkii ay hayeen ka xayuubisay dhammaan taliyaashii booliska saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir saacado kadib markii uu qarax lagu hoobtay uu ka dhacay Muqdisho.
0 Saturday March 23, 2019 - 19:16:08
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay ku sheegatay Mas'uuliyadda qaraxyo is xigxigay oo maanta barqadii ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho.
0 Tuesday March 19, 2019 - 08:24:16
Ciidamada gummeysiga Kenya ayaa isaga cararay deegaankii ugu dambeeyay oo ay uga sugnaayeen gobolka Gedo ee dhaca Koonfur galbeed dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in qarax khasaara dhaliyay lala beegsaday kolonyo katirsan ciidamada AMISOM ee duullaanka ku jooga deegaanno katirsan gobolkaas.
0 Monday March 18, 2019 - 07:19:36
Wararka ka imaanaya gobolka Galguduud ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay markale dib uga qarxeen deegaanka Xeraale oo u dhaxeeya degmooyinka Caabud Waaq iyo Dhuusamareeb.
Waraka nagasoo gaaraya gobolka Shabeellaha hoose ayaa xaqiijinaya in diyaaradaha Maraykanka ay duqeyn la beegsadeen gaari rakaab ah oo ay dad shacab ah saarnaayeen.
0 Sunday March 17, 2019 - 06:30:09
Waxaa dib loo furay qaar kamid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kadiba markii saaka ay xireen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Saturday March 16, 2019 - 06:30:09
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Telecom waxa ay daah furtay maanta adeegga Internetka 4G (Faca Afaraad – Fourth Generation) kaas oo aad uga waxtar iyo faa'iido badan 3G & 2G oo ay Hormuud horay u soo bandhigtay, adeeggan Internet-ka 4G waxa uu kuu sahlayaa in aad ku xiranto Kumbuyuutaradaaga gacanta…
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qarax xooggan oo ciidamo katirsan AMISOM maanta barqadii lagula beegsaday duleedka magaalada Muqdisho.
Weeraro qorshaysan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda ayaa sababay dhimashada saraakiil katirsanaa dowladda Federaalka Soomaaliya.